China OEM ịchụ nta otu égbè akpa 53 inch n'ogologo emeputa na soplaya |Lousun
Ịchụ nta/ịgba égbè
Akpa Duffle & Sling
Ụta na akụ
Ịchụ nta Belt & Gaiter
Ịkụ azụ & oche
Egbe egbe & wdg.
Ekele Onye Ahịa
Akpa ụta & akụ
OEM ịchụ nta otu égbè Ba...
Tactical Military Sniper Dr...
OEM ịchụ nta otu égbè...
Tactical Military Sniper Ri...
Ịchụ nta / Agbapụ égbè Ba...
OEM ịchụ nta otu akpa égbè 53 inch ogologo
Akpa égbè ogologo 53 inch, akwa oxford na-adịghị mmiri, na-adịgide adịgide na mgbochi ịdọka, yana velcro, akpa dị n'ihu na-ebu eriri aka na eriri ubu n'ubu, n'ime azụ enwere akwa akwa abụọ maka egbe azụ nwere ezigbo udi mgbe mkpọ. n'ime.
Ihe No.LSH 1005
Ihe:600D Oxford mkpuchi mkpuchi
Agba:Black + Beige, Black + Blue, ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Nkwakọ ngwaahịa:137*55*29cm, 20pcs/CN, 16.7KGS/CN
Oge Mbuga ozi :Ihe dị ka ụbọchị 65-75.
* Shei siri ike --- 53 inch ogologo, 600D oxford akwa PVC mkpuchi, enweghị mmiri, inogide na mgbochi esemokwu.
* Padding---0.8cm ọkpụrụkpụ EPE + 0.3cm ọkpụrụkpụogbojikọtara ya na 100% polyesterakwa tricot.
* Sistemu na-ebu --- A na-eji eriri naịlọn dị arọ mee eriri eriri abụọ, ya's adabana-ebu, na a n'azụ eriri mmemmem na-ebu n'ubu, a nghọta loop dụpụrụ n'elu akpa egbe, n'elu egbe, n'ebe ahụ.'PVC siri ike siri ike dị ka ihe ịchọ mma.
* Nhazi mara mma na nke bara uru --- N'ihu, e nwere'sa mgbọ akpa, mechiri site velcro.zippers ụzọ abụọ, na-enweghị oghere mkpuchi maka akpa egbe a.N'ime, e's okpukpu abụọ ahịrị ịkwa akwa maka egbe azụ, ọ's ezigbo udi ịkwanye egbe.
Uru:1.Enwere ọtụtụ ụdị akpa egbe dị maka nhọrọ gị, egbe egbe, egbe, airgun etc.soft egbe akpa, ị nwere ike họrọ adabara ụkpụrụ, nakwa akụrụngwa, ị nwere ike họrọ si anyị nkwakọba stocked.
2. Ọnụ ọgụgụ na-agbanwe agbanwe iji nye iwu na-adabere na ihe ndị a na-akwakọba.
Ọnụ ahịa 3.Competitive, àgwà kwụsiri ike dabere na AQL2.5-4.0, nnyefe ngwa ngwa, site na nke, anyị nwetara ndị ahịa.'njirimara afọ iri ọzọ.
4.NO RISK after-sales service: nsogbu ọ bụla dị mma mere, pls zitere anyị email, anyị ga-abụ ọrụ ma dozie nke ọma maka onye ahịa ọ bụla.
Enwere ike itinye ya na ịchụ nta na ịgba égbè.
Ọ nwere ma ịdị mfe nke iji na nkasi obi dị ukwuu, nke na-egosi anyị ka anyị na-achọ ịchụ nta na agbapụ egwu egwu.
Nke gara aga: Tactical Military Sniper Drag Bag 53 inch ogologo
Osote: OEM ịchụ nta otu mkpuchi Carabine
Ihe mkpuchi Airgun nwere oke
akpa egbe egbe
bid egbe akpa
Akpa egbe agba agba
Akpa egbe ịchụ nta na mpụga
ịchụ nta agbapụ egbe
Akpa egbe ogologo Maka ịchụ nta
OEM ịchụ nta otu akpa akpa 53 inch ogologo
akpa egbe dị nro
Ịchụ nta agbapụ mmiri Oxford égbè akpa
Akpa ịchụ nta / Agba egbe nwere ọkpụrụkpụ 6cm...
Ịchụ nta waterproof Camouflage Carabine cover Ba...
OEM China ịchụ nta otu egbe Slip case
Tactical Egg ụfụfụ mmiri na-egbochi mmiri egbe 38.5inch l...
Ịchụ nta agbapụ egbe akpụkpọ anụ akpa 50 inch ogologo
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shijiazhuang Lousun Textile & Garment Co., Ltd.